Wararka | Radio Himilo | Page 4
Home / Wararka (page 4)
radio himilo November 19, 2017
Arday Muslim ah oo diintiisa ku sharraxaya qaab wada-hadalka ku dhisan!
radio himilo November 18, 2017
Muqdisho – Sanadkii hore wuxuu ahaa mid mashquul u leh ardayda Pennsylvania ka dhigta sharciga Akbar Hossain, kaas oo dad badan kula kulmayay goobaha lagu shaaho si uu ugala hadlo Islaamka. “Waxaa jira meel banaan oo wararkii loo baahnaa aan lagu daabicin, ...
Muqdisho – Muslimad ku nool magaalada Patna, dalka India, waxaa xijaabka ay xiran tahay awgeed loogu diiday shaqo ay doonaysay xarunta lagu daryeelo aqoonta Delhi. “Waxaan ka xumahay inaan ku ogeysiiyo in meel dheer ka aragaaga uu ka turjumayo diintaada aad ...
Shaqo la’aanta – Musiibada ku dahsoon Bulshadeenna!
radio himilo November 15, 2017
Muqdisho – Ma ahan oo kaliya gaajada, macluusha, musuqmaasuq iyo aqoon-darrida mowduucyada kaliya ee Afrika si gaar ah looga weriyo. Xittaa marka ay soo baxaan jiil wax-bartay, fursadda ay dib ugu celin karaan aqoontooda bulshada ay ka dhasheen ayaa kamid ...
Muqdisho – Musuq waa lunsasho hanti dadweyne kana dhici kara goob si gaar ah loo leeyahay ama rug danta bulshada loogu adeego. Waxaa lagu tusaaleeyaa laaluush, dhagar, wax is-daba-marin iyo qaraabo-kiil intaba. Waddamada qaar, qofka ku dhaqaaqa musuqa waxaa lagu ...
Qaraxii 14-ka October –Bil kadib Xusuusta Maanta!
radio himilo November 14, 2017
Muqdisho – 30 cisho kadib halkan waxaa kasii dhamaanaya muuqaalladii argagaxa lahaa ee 14-kii October ka dhacay kaas oo galaaftay nolosha dad badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo maanta oo kale ifka isaga hayaamay. Dhismayaasha howshoodu wali qabyada tahay iyo kuwa ...
14 November – Maalinta Caalamiga ee Cudurka Macaanka.
Muqdisho – Maalinta Caalamiga ee cudurka Macaanka waxaa loo dabaal-degaa 14-ka November oo ah markii uu dhashay Frederick Banting, oo shaqadii uu la qabtay Charles Best ay suura-geliyay daahfurka insuliinta sanadkii 1921-kii. Maalintan waxaa markii ugu horreysay la hindisay sanadkii 1991-kii ...
Aokigahara – Keynta Geerida.
radio himilo November 13, 2017
Muqdisho – Waxaa loo suntay kobta ugu habboon ee lagu dhinto sida uu ku qoray buuggiisa The Complete Manual of Sucide, qoraaga Wataru Tsurumi, Aokigahara waa keyn mugdi ah oo dhacda ardaaga buurta Fuji taas oo ku caan ah kob ...